Ukuhlelwa kwemiboniso ye-LED ekhwele imoto
Ngophuhliso olukhawulezileyo lwomboniso we-LED, isithuthi esinyuswe isithuthi sibonakala. Xa kuthelekiswa nesiqhelo, esisigxina nesingakwaziyo ukuhambisa umboniso we-LED, ineemfuno eziphezulu kuzinzo, ekuchaseni ukungaphazamiseki, kukothuka kunye nezinye izinto.indlela yokwahlulahlula ukwahluka ngokwahlukeneyo ...
Ukugcinwa kobungcali kwindlela elungileyo ye-trailer ye-LED
Ngomboniso we-LED oqhelekileyo weemveliso ze-elektroniki, itreyila ye-LED kwimoto ephathekayo ephathekayo xa isetyenziswa kwindalo esingqongileyo, ixesha lokubaleka, njl., Zonke zinengxaki ezinzima, ke ngoko zisetyenziselwa kungekuphela nje ukujongana nokusetyenziswa kwezakhono, kodwa kufuneka kaninzi Ukugcinwa kwetreyila ye-LED, inokuqinisekisa ...
I-2021 ye-JCT enokwenziwa ngokwezifiso zeenkonzo zedilesi yokwazisa uluntu
Ngakumbi nangakumbi amashishini afake "iinkonzo kwiiprojekthi zabantu zokuziphilisa" kwimisebenzi yabo ephambili, efana neenkampani zamandla ombane nezifudumezayo, izityalo zamanzi kunye namanye amashishini ahambelana nokutya kwabantu, impahla, izindlu nezothutho. Inkonzo ye-JCT ye-JCT ...
Ukwenza isigqibo sokuthenga isithuthi sentengiso se-LED emva kokuqonda inkampani yeJingchuan (JCT)
Ngokukhula koluntu, amajelo eendaba aye esiba maninzi ngakumbi, evela kwiphephandaba lesiNtu, ngokuthe ngcembe ephuculwa aba ziincwadana, iifowuni eziphathwayo, iikhompyutha… .Upapasho lwangaphandle lungene kuzo zonke iinkalo zobomi bethu. Abantu bahambile ekwamkeleni ngokusebenzayo ukuya kancinci ...
Imoto yentengiso ye-LED yindibaniselwano egqibeleleyo yesithuthi esiphathwayo kunye nesikrini se-LED
Kwiminyaka yakutshanje, amashishini asekhaya nangaphandle nangaphezulu kunye nemithombo yeendaba zangaphandle zisebenzisa isithuthi sentengiso se-LED. Banxibelelana nabathengi ngokusasaza ngqo, imiboniso yendlela kunye nezinye iindlela, ukuze wonke umntu aliqonde ngcono uphawu kunye neemveliso zabo, kunye nokuphucula abathengi ...
Iselfowuni ye-trailer ye-mobile-sisixhobo esitsha sopapasho lweendaba zangaphandle
IKrisimesi yonyaka iza kungekudala, kwaye iindawo ezinkulu zentengiso nazo ziqala ukubhengeza kwaye zilungele umnyhadala wentengiso, ngeli xesha ungakhetha itreyila ye-Mobile ye-LED njengemveliso yakho yokunyusa amajelo eendaba ngaphandle kwesixhobo esitsha. I-Jingchuan Mobile ye-trailer ye-LED yenziwe nge-chass ...
Intengiso yendlela entsha yemithombo yeendaba zentengiso yangaphandle-izibonelelo zonxibelelwano zesithuthi se-LED
Iscreen semoto yeJingchuan ye-LED, sisikrini esikhulu sangaphandle somboniso we-LED, isibonakaliso esikhulu sangaphandle somboniso we-HD esonyuswe emzimbeni wetreyila yeselfowuni yemithombo yeendaba zentengiso yangaphandle, esetyenziselwa ukukhuthaza intengiso yangaphandle kunye nokukhuthaza, isiphumo esimangalisayo. Apha ngezantsi siza kuba ...
Iilori zasesiteji zimelana njani nokubanda ebusika?
ngomphathi ku 20-09-24
Iilori zasesiteji zimelana njani nokubanda kakhulu ukuba kuyabanda ebusika? Ngobusika obubandayo, iinqwelomoya zingamelana njani nokubanda? Kuthekani ukuba kuyabanda kakhulu ngexesha lokusebenza kwaye ukuphakamisa i-hydraulic akunakusebenza? Okanye kuya kuthini ukuba ilori yeqonga ayinakuqala? Umsebenzi wokumelana nengqele wetrakhi yenqanaba ...
Iinketho zolawulo kwiilori zesigaba
Zimbini iintlobo zolawulo lweelori zenqanaba lescreen, enye sisikhokelo kwaye enye irimothi. Okwangoku, ineendlela ezahlukeneyo zokusebenza ezinje ngokusebenza ngesandla, ukusebenza kwerimothi, ukusebenza kweqhosha, njl. Yeyiphi imo yokusebenza engcono? Ukususela ...
Qonda ukuhlelwa kweBillboard Stage Truck ngaphambi kokuthenga
Iloli yebhola yebhilibhodi ibonakala ngakumbi nangakumbi ebomini bethu. Itraki ekhethekileyo yemidlalo ehambayo kwaye inokuphuhliswa ibe kwinqanaba. Abantu abaninzi abazi ukuba loluphi uhlobo lokuthenga ekufuneka beluthengile, kwaye malunga noku, umhleli we-JCT udwelise udidi lweetroli zasesiteji. 1. Cl ...
Intshayelelo kwiimpawu zeetraki ezihambahambayo
Kwibala lokuthengisa ngaphandle, kukho ilori yeqonga elihambayo. Isigaba saso esakhelwe ngaphakathi sihamba ngokukhululeka kunye nebhokisi yetraki, ke ayonyusi kuphela umphumo wentengiso, kodwa ikwenze "inqanaba lokuhambisa" lizaliseke. Ineziphumo ezibonakalayo zentengiso, eziluncedo neziluncedo. IJCT ...
Ukuhamba kweloli kwinqanaba lenqanaba lihamba ngamanqanaba
Kwisitrato esinengxolo, kuya kufuneka ukuba uyibonile iveni enokuvela. Ezi zixhobo zenqanaba eliphambili zibonelela ngokulula kakhulu kwamanye amashishini ukuba enze imisebenzi kunye nokwazisa kwaye isiphumo siyabonakala. Olu hlobo lutsha lwezixhobo zeqonga lihamba kwinqanaba leetraka Yonke indawo apho uhamba khona ...
Ukuhlelwa kwesithuthi esinyuswe nge-LED ...
Ukugcinwa kobugcisa be-trai efanelekileyo ye-LED ...
Umva weFestile ebonisiweyo, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile, Iinkampani zeNtengiso yeTraki, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile For Sale, Intengiso yeBillboard yeTraki, Isikrini esikhokelwayo kwimoto,